Silvio Berlusconi oo wasiiradiisii kala baxay Xukuumada Italy - iftineducation.com
iftineducation.com – Raysalwasaarihii hore ee dalkaasi Talyaaniga Silvio Berlusconi ayaa xisbigiisa kala baxay isbaheysiga Xukuumada Talyaaniga.
Silvio Berlusconi ayaa ku micneeyey tilaabadan mid ay uga soo horjeedaan qorshaha xukuumada Talyaaniga ee dhanka miisaaniyada & Canshuuraha, balse Raysalwasaaraha Talyaaniga Enrico Letta ayaa sheegay in arrintan ay salka ku heyso xukunkii Berlusconi lagu xukumay musuq maasuq. Raysalwasaare Letta ayaa ku tilmaamay tilaabadan Berlusconi uu qaaday mid “Waali” ah.
Bisha soo socota ayaa lagu wadaa in Golaha Odayaasha [Senateka] ee dalkaasi Talyaaniga cod u qaado in kursiga Senateka ee uu ku fadhiyo Silvio Berlusconi laga xayuubiyo kadib xukunkii maxkamada sare ee Talyaaniga ku riday hogaamiyahaasi. Tilaabadan uu xukuumada uga baxay ayaa lagu tilmaamay mid uu Berlusconi uu ku doonayo inuu uga hortagayo codbixintaasi.
“…Tilaabadan waa mid uu danihiisa shaqsiyadeed uu ku fushanayo mana ah wax dan wadanka ugu jirta…”ayuu yiri Raysalwasaaraha Talyaaniga Enrico Letta oo hada xukuumadiisa burburtay, arrintaasi ayaa keeni karta in doorasho horleh dalkaasi Talyaniga ka dhacdo.
Xukuumada Talyaaniga ayaa ku dhisneyd isbaheysiga, xisbiga Berlusconi ayaa 5 wasiir ku lahaa golaha Wasiirada, waxayna ka bixintaanka xisbiga Berlusconi ay burbur ku keentay dhismaha Xukuumada Talyaaniga oo markale madaxa la gashay xiisado siyaasadeed.
Shacabka Talyaaniga ayaan xiligan diyaar u ahayn Doorasho horleh, waxayna rajeenayaan in Raysalwasaaraha uu soo dhiso xukuumada cusub isagoo isbaheysi kale ka raadsanaya xisbiyada kale ee Baarlamaanka kuraasta kuleh, walow arrintaasi aan la aqoon sida ay ugu hirgeli doonto.
Xukuumada Talyaaniga ayey horyaalaan qorshayaal adag oo ku aadan dhanka isbedalka dhaqaalaha dalkaasi oo hoos u dhacweyn ku yimid.